Mutungamiri weBotswana Otadza Kuenda kuMusangano weSADC kuMaputo neNyaay yeCovid-19
VaEmmerson Mnangagwa naVaMokgweetsi Masisi 5
Mutungamiri weBotswana, VaMokgweetsi Masisi, vanoti havasi kukwanisa kuenda kumusangano we Extraordinary SADC Troika Summit kuMaputo nemusi weChina uko vange vachifanira kuzeya nezvehondo iri munyika iyi nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa uye mutungamiri weSouth Africa VaCyril Ramaphosa.
Izvi zvinotevera dando ravo rekumbozvitsaura paruzhinji mushure mekunge chipangamazano chavo chabatwa nechirwere cheCovid-19. VaMasisi ndivo sachigaro weSADC Troika uye vanoti havafunge kuti vari munjodzi.
Mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekuburitswa kwemashoko muBotswana rati mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaSlumber Tsogwane, ndivo vave kutarisirwa kumirira Botswana pamusangano uyu.
SADC mumashoko kuvatori venhau inoti vatungamiri ava vari kuzeya nyaya yekuti vobatsira sei Mozambique muhondo iri mudunhu reCabo Delgado iro riri kurwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero chichitsigira Islamic State.
Chikwata ichi chamanikidza kambani yemafuta yeTotal kuti imire kuita basa sezvo musisina kugadzikana nenyaya yehondo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda mudunhu iri.
Chimwe chizvarwa, VaNyasha Mugwagwa, vakatourayiwa neISIS.
Nemusi weChitatu makurukota ehurumende anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kusanganisira VaFredrick Shava vachimirira Zimbabwe ange ari mumusangano uye achatura zvisungo zvavo kuvatungamiri venyika. SADC yakatobuda nechisungo chekuti itumire chikwata chemauto kunoona kuti ingapindire sei muhondo iyi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaJoy Mabenge, vanoti zvange zvakakosha kuti vatungamiri vose kusanganisira VaMasisi vaneg vari pamusangano uyu sezvo Botswana iri imwe nyika ine mabhesi anokwanisa kushandiswa neSADC kurwisa ISIS kana pakatenderanwa kuti mauto apindire.
United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vakatiza misha yavo vahityira hupenyu hwavo mudunhu reCabo Delgado.
Hurukuro naVaJoey Mabenge